Sida loo sameeyo iyo dhoofinta Muqaal ah oo la Lightroom 3
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo iyo dhoofinta Muqaal ah oo la Lightroom 3
Photoshop Lightroom, edition gaarka ah ee Photoshop, laga yaabee in aan sidii xirfad sida CS Photoshop ah, laakiin waxa ay u ogolaanaysaa sawir xirfadle iyo enthusiast si fudud oo dhaqso loo abaabulo, edit iyo share sawirada. Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida loo sameeyo slideshow la Lightroom 3 iyo dhoofinta siyaabo badan in ay sawiro aad ugu.
Eeg sidoo kale : sameeyo slideshow la music , sawir, video iwm
Samee Muqaal ah ee Lightroom 3
Mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan Lightroom waa slideshow ah imprompt oo kuu ogolaanaya in aad si aad u daawato sawirada shaashada buuxa adigoo isticmaalaya template hadda iyo goobaha ku baraneysaa Muqaal ah, iyo heerka, isku shaandheyn, ama tirtirto photos galka ah.
Si loo abuuro slideshow ah ee Lightroom , fadlan raac tallaabooyinkan:
1. photos Select maktabadda. In module Library, waxaad dooran kartaa sawiro in Grid ama Filmstconvert aragtida ah. Si gal ah ama ururinta photos in Muqaal, u tag fayl ama guddi Collection in ay doortaan sawiro.
2. Sort si sawir slide ah. Tag Muqaal module iyo jiidi photos ee Filmstconvert si ay u diyaarin si la doonayo. Ogow in aadan soo jiidi kartaa si aad u sameysato haddii aad dooratay ururinta smart.
3. Dooro template slideshow ah oo astaysto haddii loo baahdo. Muujinta template slideshow ah ee Browser Template in ay ku eegaan oo ay isticmaalaan in aad slideshow. Options ayaa, Layout, dahaadhaa, hortegi lahaa, iyo goobaha horyaal waa avaible. Marka aad ku qanacsan tahay template kartoo, badbaadin dambe la isticmaalo.
4. Samee duration iyo kala guurka goobaha. In guddi Radidiyaha ee module Muqaal ah, u dhigay fursadaha mudada kala guurka oo slide. Sidoo kale dooran file music ah si ay u isticmaalaan sida asalka ah slideshow. Haddii loo baahdo, sheeg Intro iyo credit raaceyso. U gudub tallaabada haddii aad slideshow dhoofiyo sida PDF sababta oo ah PDF duubey isticmaalaan muddada slide go'an Oo waxay u engegi kala guurka.
5. dhoofinta Lightroom slideshow si PDF ama video . Riix badhanka Kulanka Xiisaha Muqaal si uu u daawado slideshow finalka. Haddii aad ku faraxsan tahay natiijada, riix Video dhoofinta ama dhoofinta PDF button bidixda hoose inay u dhoofiyaan slideshow.
Lightroom Muqaal Talooyin:
1.For Lightroom 2 slideshow: aalada waa la mid.
2.You ayaa lagu talinayaa si loo badbaadiyo aad khariidad show slide sida template caado si aad u fudud u isticmaalin karaan, badbaadinta markii aad qaali u ah.
Dhoofinta Lightroom Muqaal
Waxaad dhoofin karo Lightroom slideshow si PDF slideshow (u baahan tahay Adobe Reader) ama slideshow video baraneysaa Muqaal ah. Sidoo kale waxaad ka dhigi kara slideshow ah si ay u daabacaan online in Web module.
Dhoofinta Lightroom Muqaal in PDF
PDF waa heerka uu noqonayo baasaboorka la qaadi karo, taasoo macnaheedu yahay in aad ka daawan kartaa slideshow Lightroom ku dhufto ee kala duwan ilaa iyo inta Adobe Reader waxa lagu xiraa. Si aad u dhoofiyaan slideshow Lightroom sida PDF , guji dhoofinta PDF button bidixda hoose ee Muqaal module. Xadka waxaa ka mid ah ma music iyo lahayn goobaha duration badbaadiyey.
Dhoofinta Lightroom Muqaal in Video
Videos Muqaal la ciyaaray ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ku kombiyuutarada kale ciyaaryahanka warbaahinta socon. Lightroom dhoofin doonaa slideshow sida H.264 MPEG-4 files oo dhameystiran la music, qaabka slide iyo goobaha kale ee loo maqli karo. Sida lagu badbaadinayo slideshow si PDF, guji dhoofinta Video button bidixda hoose ee Muqaal module inay doortaan qaab video ah oo badbaadin slideshow Lightroom in computer.
Dhoofinta si Web
Lightroom kuu ogolaanaya in aad si toos ah uga dhigi slideshow ah web la Web module. Lightroom yimaado dhowr matoorada si ay u abuuraan slideshow web hoos Web tab. Matoorada waa wax la mid ah foom oo gallery ka dhigi suurto gal u noqon lahayd photos galay meelo ka mid ah style pre-loogu talagalay in qasabno yar. Qaadashada SimpleViewer engine tusaale ahaan, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan "Isticmaalka" style iyo sheeg qaar ka mid ah info kale oo lagama maarmaan ah sida info goobta, muuqaalka, caption, iwm, iyo waxa ay diyaar u tahay inay geliyaan slideshow Lightroom in aad website.
Dhoofinta in DVD?
Waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale u baahan tahay si ay u gubaan slideshow in DVD loogu daawashada TV-ga ama borojektar, si aad ula wadaagto asxaabtaada ama macaamiisha. Waa fikrad wanaagsan in la dhoofiyo slideshow Lightroom in video iyo gubi aad DVD gubi jecel. Haddii kale, Wondershare DVD Muqaal dhise si toos ah u slideshow fantastik ah u beddesho kartaa sawiro aad la sawiro iyo koob dhaceen. Waxa kale oo ka mid ah dhisay-in qalab DVD gubashadii samaynta DVDs kasta oo ciyaaryahan DVD caadiga ah. Plus, version Mac ka nayaa qaadashada slideshow ah, oo waxaad soo eedeeyo qiimo jaban.
Sida loo abuuro Muqaal ah oo la Photoshop